About Information Technology: November 2015
ဒီ Game ရဲ့ Info ကို Facebook မှာ အသိတစ်ယောက် Share ထားတာတွေ့ လို့ google ရှာကြည့်ရင်း တွေ့ တာ နဲ့ ထင်ပေးလိုက်တာပါ။
Posted by Ko Phyowailin at 1:04 AM No comments:
Labels: Basic Networking, CCNA, CCNA Labs, CCNP, Softwares
The Fundamental of Network Security Guide
Posted by Ko Phyowailin at 12:25 AM No comments:
SyncBackSE V5 Application with crack
SyncBackSE V5 version ဖြစ်ပါတယ်။ File တွေကို Windows မှာ ပါတဲ့ Backup service နဲ့ မလုံလောက်တဲ့ အခါ မှာ သုံးကြပါတယ်။ Crack file ပါပါတယ် ဒါပေမဲ့ Installation လုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ Auto Update တွေ ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ မပိတ်ထားမိရင် crack အလုပ်မလုပ်တော့ပဲ license register လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Testing လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ backup application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Features တွေကတော့ သူ ရဲ့ official website မှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 11:18 PM No comments:
Posted by Ko Phyowailin at 10:57 PM2comments:
Labels: CCNP, Ebooks
Posted by Ko Phyowailin at 10:56 PM No comments:
Paessler.PRTG.Network Monitor Software with Crack
Paessler PRTG Network Monitor Software ပါ Network ကို Monitor လုပ်တဲ့့နေရာမှာတော်တော် လေးကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ .ခု တင်ပေးတဲ့ File ကို Study လုပ်ဖို့ ပဲသုံးစေချင်ပါတယ်။ တကယ် real world မှာတော့ license နဲ့ ပဲသုံးသင့်ပါတယ်.။
Posted by Ko Phyowailin at 12:00 AM No comments:
CCNA Data Center Study Guide (Sybex)
CCNA Data Center လေ့လာသူများအတွက် Sybex ကထုတ်တဲ့ စာအုပ်ပါ။
Posted by Ko Phyowailin at 9:11 PM No comments:
Labels: CCNA, Ebooks
Professional Web Developer (Myanmar) (Ei Maung)
ဆရာအိမောင် ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်. သူကိုယ်တိုင်လဲ သူ့ ရဲ့ site မှာလဲ Share ထားပါတယ်.။ အောက်တွင် လည်း download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 8:15 PM No comments:
Labels: Ebooks, Ebooks (Myanmar)
Ubuntu Guide (Myanmar) (Ei Maung)
ဆရာ အိမောင် ရေးသားထားသော Ubuntu အကြောင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ကိုယ်တိုင် ebook ကို သူ့ ရဲ့ site မှာ ပြန်ရှယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ site မှာ သွားရောက်ရယူနိုင်သလို ဒီမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 8:12 PM No comments:
Labels: Ebooks, Ebooks (Myanmar), Linux
Posted by Ko Phyowailin at 8:07 PM No comments:
Labels: Ebooks, ITIL
CCNA သည် Networking နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ သူတွေ အတွက် ရယူထားသင့်တဲ့Certificate တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.။ CCNA ကို Self-Study လုပ်ပြီးဖြေမည့်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ပေးခြင်းပါတယ်။
၁) Cisco Official Guide (ICND-1/ ICND-2)
၂) CCNA Portable Command Guide
၃) CBT Nuggets Video Series(ICND-1/ ICND-2)
၄) RHC Technologies Training Series
၅) Ko Thant Zin Soe Video Training & Study Guide
၆) Ko Aung Naing Moe CCNA note (Buy from MCPA)
၇) Sayar Zaw Lin (CCNA intro) & Internetworking books
၈) www.9tut.com (ဖြေခါနီး အတွက် ဒီsite မှာ ရှိတဲ့ question တွေကို ရအောင်လုပ်သွားသင့်ပါသည်။
၉) Latest Dump
Posted by Ko Phyowailin at 7:29 PM No comments:
Posted by Ko Phyowailin at 7:19 PM2comments:
Sybex ITIL Foundation Guide
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) သည့်လေ့လာထားသင့်ပါသည်။
Posted by Ko Phyowailin at 1:58 AM 1 comment:
Project Management Exam(PMI) 5th Edition Ebook
ဘာပဲပြောပြော ဘယ်ကနေပဲ စစ ကျွန်တော် တို့ သည် Level တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖြတ်သွားရမှာပဲလေ. .ကိုရောက်နေတဲ့Level တွေ မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိလာရင်တော့ ထပ်ဖြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။။ ဒီ စာအုပ်ကလေး က ကျွန်တော်တို့ ကို Management Level ရောက်ဖို့ အတွက် သိထားဖတ်ထားရမည့်စာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲ ဖြေသည့်ပဲ ဖြစ်စေ၊ မဖြေသည်ပဲဖြစ်စေ ဖတ်ထားတာမမှားပါဘူး.။ Exam ဖြေပြီး Certificate ယူထားနိုင်ရင်တော့ ပို ကောင်းတာပေါ့၊ Exam ကြေးက တော့ 500$ လောက်ရှိပါတယ်။ အောက်တွင် Download ၇ယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 1:48 AM No comments:
Labels: Ebooks, Project Management Learning
Juniper Exam ဖြေမည့်သူများအတွက် လေ့ကျင့်နိုင်ရန် Junos image file
Junipe JNCIA exam ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် Lab တွေ စမ်းလို့ ရအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့junos OS image file ပါ။ virtual box or vmware နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်လို ချိတ်ပြီးသုံးရတာကို နောက် post တစ်ခုအနေ နဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် googling လုပ်ကြည့်လို့ လဲရပါတယ် GNS3 site မှာ ရေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော် JNCIA ဖြေတုန်းကတော့ တော်တော် လေးအထောက်အကူတော်တော်လေးပြုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျွန်တော် Juniper lab လေးတွေ လုပ်ပြီးတင်ပေးသွားပါ့မယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 7:36 PM No comments:
Labels: Basic Networking, Juniper, Softwares
Packet Tracer 6.2 simulator for CCNA and CCNP
CCNA နဲ့ CCNP Networking exam ဖြေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် လေ့ကျင့်နိုင်ရန် Packet Tracer 6.2 latest version (Student version) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
Posted by Ko Phyowailin at 7:10 PM No comments:
Network Engineer တွေ အတွက် F5 networking ဟာလဲ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်..ဒါကတော့ F5 Exam Code F5-101 အတွက် study Guide ပဲဖြစ်ပါတယ်..simulation အတွက်သူ့official website ဖြစ်တဲ့ https://f5.com/ မှာ download ၀င်ဆွဲပြီး Trial version အနေ နဲ့ testing လုပ်လို့ ရပါတယ်..။
Download link for ebook
Posted by Ko Phyowailin at 10:19 PM2comments:
International Exam တွေ အတွက် ရှာတွေ့ ထားတာပါ ..သူငယ်ချင်း ညီအကို တစ်ချို့ ပြန်share ထားကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်...မသိသေးတဲ့ လူတွေ အတွက် ပြန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်... တင်ပေးထားတဲ့ သူကတော့ Mr.Mohammed Nagieb ဖြစ်ပါတယ်..စာမေးပွဲဖြေမယ့်သူများ မိမိသက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ချင် တဲ့ သူများ ..download ရယူနိုင်ပါတယ်..။
Note: VCE player 1.1.7 ကို ပါ share ထားတာတွေ့ ရပါတယ်..သူတင်ထားတဲ့ files များကို ဒီplayer နဲ့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 7:52 PM No comments:
Labels: CCNA, CCNP, MCSA, VMware
CCNA Security New Version 210-260 Official Guide
CCNA Security 640-554 exam ဟာ November 30 2015 မှာ ဖြေလို့ ရတော့ မဟုတ်ဘဲ Exam code အသစ် 210-260 ကို သာ ဖြေရတော့မှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကတော့ New Version အတွက် official Cert Guide ဖြစ်ပါတယ်...Security သမားတွေ အတွက် သာမက Networking လေ့လာနေသူများ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေ၇ုံသာမက exam အသစ်ကို ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် ပါ အဆင်ပြေပါတယ်... အောက်ပါ Link အတိုင်း download ဆွဲရယူနိုင်ပါတယ်..။
Posted by Ko Phyowailin at 7:30 PM No comments:
Introduction to Router (CCNA Myanmar)
ဒီစာအုပ် ကလေးကတော့ Netpro Myanmar Networking သင်တန်းမှ ကျွန်တော့ တို့ ဆရာ ဦးအောင်မျိုး သင်ကြားမူတွေကို သင်တန်းက အကိုတစ်ချို့ က ပြုလုပ်ထားခြင်ြး ဖစ်ပါ တယ်.. CCNA လေ့လာနေတဲ့သူတွေကို အထောက်အပံ တစ်ခု ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
Posted by Ko Phyowailin at 6:32 AM2comments:
Web Server Installation and PHP Application install on Windows Server 2008 R2 or Windows 7
Microsoft Web Server ပေါ်မှာ PHP application တွေ run ပြီး သုံးလို့ ရအောင် ရေးပေးထားတဲ့ pdfလေးပါ ပြုလုပ်တာက တော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်...မပြည့်စုံမူတွေ များနေတာကို သိပါတယ်...သိစေချင်တာလေးပဲရှိပါတယ်..။
Posted by Ko Phyowailin at 6:27 AM No comments:
VMware 6.0 Data Center Virtualization အတွက် Unofficial Guide စာအုပ်လေးပါ။
Posted by Ko Phyowailin at 6:13 AM No comments:
Labels: Ebooks, VMware
ကျွန်တော် တို့ က အဲဒီလောက် တက်နိုင်တဲ့ အထဲမပါဘူးလေ..
တစ်ချို့ နည်းပညာ စာအုပ်တွေ ဈေးကြီးတယ်
တစ်ချို့ ဝယ်နိုင်ရဲ့ သားတောင် ပေးဝယ်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေ
တစ်ပါးသူရဲ့ ..ပညာကို လေးစားပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ..။
နောက်ဆုံးပန်းတိုင်လို့ ၊..ကိုယ့်အသိပညာကို Sharing လုပ်တယ်လို့ 
သဘောထားပေးကြပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ တက်နိုင်လာတဲ့ တစ်နေ့ 
၀ယ်လို့ အဆင်ပြေ လာနိုင်မဲ့ တစ်နေ့ ကျွန်တော် တို့ ..Official သုံးပါ့မယ်...။
ကျွန်တော် ကြားဖူးတဲ့ ...ကျော်ကြားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုရင်
သူ့ ဘ၀မှာ သူ့ ဖတ်ခဲ့ တဲ့ ..စာအုပ် တော်တော်များများက
ခိုးယူလာတဲ့ ..စာအုပ်တွေ များပါတယ်...တဲ့ ။
ကျွန်တော် ကူးယူခဲ့ သမျှစာအုပ် ရေးတဲ့ သူနဲ့ထုတ်ဝေသူ တွေကို ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ။
ကိုကောင်းသူ @ ဖြိုးဝေလင်း
Posted by Ko Phyowailin at 4:11 AM3comments:
CCNA Interactive Video နှင့်ပတ်သက်၍ Part II
သင်ခန်းစာနှင့်ပတ်သက်၍ Ko Thant Zin Soe က စာအုပ် နှင့် lab များကို ရေးသားထားခြင်းကို Share လုပ်ပေးခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။
Study Guide Download Link
Packet tracer Labs in Training
Posted by Ko Phyowailin at 1:35 AM3comments:
Labels: CCNA, Ebooks, Ebooks (Myanmar), Training Videos
Created by RHC Technologies
ဆရာ ကိုစိုင်းလင်းသူ ဖန်တီးထားတဲ့ Video file များ ကို သွားရောက်လေ့လာနိုင်ရင် Youtube linke ကို Share ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ko Phyowailin at 1:24 AM No comments:
Labels: Basic Networking, CCNA, CCNA Labs, CCNP, Network +, Training Videos, VMware
CCNA Interactive Video (Myanmar Version)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuhIUjK0hilJ8WtK5HJHNxRcP5VK9QWnv created by Ko Thant Zin Soe
Posted by Ko Phyowailin at 1:21 AM4comments:
Labels: CCNA, Training Videos
CCNP Route Version2Official Guide
Posted by Ko Phyowailin at 1:09 AM No comments:
gns3vault.com ၀ယ်ရသော စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 1:02 AM No comments:
CCNP version အသစ်အတွက် Portable Command Guide ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 12:34 AM3comments:
Vmware Certified Associate -Data Virtualization
Vmware Data virtualization ကို အစကနေ လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ဒီစာအုပ်လေး Share လိုက်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 12:06 AM3comments:
Wireless Network Watcher software လေးပါ Network IP Scanner လို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Posted by Ko Phyowailin at 11:55 PM 1 comment:
Ebooks နှင့် ပတ်သက်၍
တစ်ချို့ စာအုပ်များသည် မိမိ ကိုယ်တိုင် Googling လုပ်၍သော်လည်းကောင်း တစ်ချို့ ကိုတော့ ၀င်ကြည့်နေ့ ကျ blog များ site များထဲမှ ရှာဖွေ ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းတင်သူကို မသိတော့၍ Credit မလုပ်နိုင်တာ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Posted by Ko Phyowailin at 11:38 PM No comments:
Zabbox Network Monitoring Essentials
Zabbix ဆိုတာ Enterprise level တွေ မှာ သုံးတဲ့Monitoring Platform တစ်ခုပါ။ Zabbix အတွက် လေ့လာဖို့ ကောင်း တဲ့ Essentials စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ Link မှ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 11:13 PM No comments:
Labels: Ebooks, Network +
Juniper Exam ဖြေမည့်သူများအတွက် လေ့ကျင့်နိုင်ရန် J...
Web Server Installation and PHP Application instal...
gns3vault.com ၀ယ်ရသော စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ http://p...